Tsy Voasakana Ny Fivarotantena. Na Ao Anatin’i Tajikistan Fatra-Pitahiry Ny Nentin-drazana Aza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2015 20:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Català, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Araka ny fanitsiana vaovao natao tamin'ny lalàna momba ny fivarotantena, izay mpivarotena tratra manitsakitsaka fanindroany ny lalàna dia hahazo sazy goavana kokoa sy mety hiatrika fampidirana am-ponja hatramin'ny roa herinandro.
Ireo mediam-panjakana tsy ara-pivavahana, mpitolona, dia nilaza koa tamin'ity taona ity fa nitafy hijabs ireo mpivarotena mba hanafenana ny asan'izy ireo, nefa tsy nanome porofo maharesy lahatra tamin'ny fiampangàny. Araka ny lalàna Tajik dia tsy azo saziana ireo mpividy fahafinaretana, na dia manao tsolotra aza amin'ny ankapobeny ny ankamaroan'izy ireo mba tsy hahitàna ny endriny hiseho anaty vaovao amin'ny fahitalavitra na any anatin'ny tranonkalan'ny ministeran'ny atitany.
Nanjo ny lehibe ara-politika sy toekarena tao Rosia ihany koa ny fotoan-tsarotra, niteraka dom-berina. Andro vitsy monja taorian'ny nilazàna an'i Tajikistan ho firenena marefo indrindra niharan'ny hanoanana tany Azia taorian'ny naharavàn'ny Firaisana Sovietika.
Sarotra ho an'ny vehivavy efa nanambady ny hahazo vady indray, satria ny ankamaroan'ireo lehilahy ao anatin'ity repoblika izay miozolmana no betsaka ao aminy ity, dia mitaky hatrany ny maha-virijiny alohan'ny hidirana ao anaty tokantrano. Nitondra mihitsy aza io ho amin'ny fitomboan'ny fanaovana fitsirihana ny maha-virijiny, naroso ho toy ny fototry ny tokantrano sambatra.
Nitarika ireo reny tanora sasany ho amin'ny famonoana tena ny hadisoam-panantenana ara-toekarena tao amin'ny firenena, raha ny sasany kosa nisafidy ny hivaro-tena, na izany eo an-toerana na mivoaka any Rosia.
Hazavain'i Dilovar Munavvarov, mpampiasa Facebook, ny anton'ny famonjàna ireo mpivarotena tsy hahasakana na inona na inona ary hampitombo aza ny zava-mitatao efa goavana atrehan-dry zareo :
Nifanojo tamin'ny fanamelohana ny fanokafana tsy ela akory an'ilay pejy Facebook fivarotana fitaovana ho an'ny filàn'ny nofo tao amin'ny firenena ilay lalàna manenjika ny asa fivarotantena. Hatreo dia nakatona ny pejin'ilay toeram-pivarotana taorian'ny nanaitairany fahalinana sy fanakianana.